Ahoana no fomba hanamboarako rindran-damba tsara ny lalana marina?
Mila mamorona rindran-damba tsara ianao, satria tsy isalasalana fa eo amin'ireo bilaogy lehibe manangana ny fototry ny SEO tsara. Mazava ho azy, misy ny antony maro samihafa ampiasain'ny Google hamoaka fanapahan-kevitra momba ny pejy ho an'ny tranonkala rehetra amin'ny Internet. Ary misy ny lahatsoratra marobe mafonja nivoaka isan'andro, na dia tsy nampiarahina tamin'ny backlinks organika aza dia tsy misy dikany ny dingana rehetra.
Noho izany, alohan'ny zavatra hafa dia tsy tokony handany fotoana sy ezaka fotsiny ianao raha te hanana rohy maro araka izay azo atao. Tsy mety izany. Ankoatra izany, mety mety hitarika ny fahasahiranana amin'ny sainan'ny tranonkalanao amin'ny sazy Google ianao. Izany no mahatonga anao hifantoka kokoa amin'ny kalitaony, fa tsy hoe be loatra. Toy izao ny fomba ahafahanao manorina backlinks kalitao ny lalana mety - manaraka ny fomba fanao tsara indrindra ampiasain'ireo masoivoho SEO sy ireo mpanome tolotra aterineto. Ireto ambany ireto misy paikady miroborobo maromaro izay nanandrana ny blaogiko.
Mivoaka amin'ny Guest Blog Posting
Ny fandefasana Guest ao amin'ny fonosanao no iray amin'ireo fomba lehibe indrindra hananganana backlinks kalitaon'ny tranonkala. Ankoatra izany, ity paikady fanorenana rohy ity dia matetika ampiasain'ny serivisy marika nomerika sy mpandraharaha SEO. Ny zavatra rehetra ilainao ahafahana mivezivezy mivantana mivantana eo anoloan'ny mpihaino marobe dia ny fametrahana fotoana kely fotsiny hanoratana lahatsoratra ambony momba ny vahiny, ary mangataka fanazavana amin'ny backend amin'ny tranonkalanao ho valin'izany.Amin'izany fomba izany, ny famahanam-bolongana vahiny dia mety ho lasa tombony volamena tsy vitan'ny fananganana backlinks kalitao, fa mba hampisehoana ny fahaizanao matanjaky ny lohahevitra, ka noho izany dia manatsara ny fanamafisana ny votoatin'ny sehatry ny vohikalanao amin'ny fotoana iray ihany.
Miaraha amin'ny tranokalan'ny Social Bookmarking
Ny tsoratadidy ara-tsosialy ihany koa dia tetik'asa azo ekena hahazoana backlinks fanampiny. Raha ny marina, mifandray amin'ny tranonkala Search Engine Optimization ny pejy momba ny tsoratadidy sosialy. Izany no mahatonga azy ireo ampiasain'ny manam-pahaizana SEO hanangona fitohanana bebe kokoa ary hanangana backlinks kalitao - ny iray amin'ny iray. Ny zavatra dia ny tranonkala sosialy (toy ny Digg, Reddit, Delicious, Stumbleupon, sns. ) dia mitsimoka sy mikarokaroka amin'ny Google sy ireo fitaovam-piadiana lehibe hafa. Noho izany, ny fandefasana ny pejin'ny tranonkala ho an'ny tranonkala sosialy dia midika fa ny votoatinao, ary koa ny rohy, dia azo inoana kokoa ho hita sy ampidirina amin'ny haavo haingana.
Profit from Article and Document Sharing Directories
Ny tranonkala fifampizarana amin'ny dokam-barotra dia fomba hafa hananganana safidy azo antoka azo antoka sy tsy mandany dolara. Manoro hevitra ny mitsidika an'i Docstoc sy Scribd aho, satria nahita azy ireo tsara ho an'ny fanorenana rohy - izay ilainao eto dia ny mampakatra ireo rakitsoratra bilaogy mifandraika amin'ny endrika PDF. Azonao atao ihany koa ny mandeha amin'ny lisitry ny dokambarotra kaonty, ary efa ela be ity tetikady ity no iray amin'ireo fomba mahomby indrindra hanamboarana rindran-damina mahazatra miaraka amin'ny fahefana matanjaka.
Mariho anefa fa tsy ny lahatahiry rehetra dia ampy tsara handaniana ny fotoanao any. Manaova fanamarinana indroa fotsiny fa manan-danja manokana amin'ny foto-kevitrao, ary manana ny fantsom-bokatra na vondron'olona kinendry. Ataovy izany, aza hadino ny manana ny tononao fanoratana izay tokony hiverina amin'ny tranokalanao na blôginao. Ataovy ao an-tsaina, fa raha tsy misy fanamafisana tsara kokoa ny sandan'ny rakitrao dia mety ho tsy ilaina sy tsy ilaina Source .